Mul'annoo - Kamshaalee - Dirqaalee Filadhu
Marsuu Haalataa cuqaasa wantaa booda
Haala cuqaasa-hantuuttee jijjiira,kunis qabannoowwan marsuu erga wanta cuqaafteen booda mul'ata booda irra deebi'ii cuqaasi. Wanticha kallattii barbaaddetti marsuuf qabannoo harkisi.
Sararawwan Ariitii Mul'isi
Sararawwan ariitii mul'isa yookin dhoksa,kunis wantoota islaayidii kee iratti hiriirsuu dandeesa. Sarara ariitii haquuf islaayidii dhaamsuuf harkisi.
Yammuu Siqstu Qajeelcha
Ariitii Mudanawwan Fuulatti
Gara Muudana Fuulaatti Ariifachiisuu
Ariitii Hadaaraa Wantatti
Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu.
Ariitii tuqaalee Wantatti
Gulaaluu Atataamaa Hayyami
Akka yeroo waanta barruu cuqaastu hatattamaan gara haalata gulaala barruutti tartu ifteessa.
Gulaalii Mil'uu Haayyama
Bal'ina Barruu Qofaa Fili
Gabbatee Barruu Qofa Fili
Barruu ida'uuf lama-Cuqaasi
Haala cuqaasa-hantuuttee jijjiira kanaaf, barruu ida'uuf yookin gulaaluf wanta lama-cuqasuu ni dandeessa.
Barruu ida'uuf Lama-cuqqaasi
Wanta amala waliin fooyyessi
Sajoon kun kabala Dirqalaa irratti yoo ka'ee wantoonnii amaloota isaanii waliin mula'atu wayita isaan kaaftuu. Sajoo kun yoo hin kaane, roga qoftuu mul'ata wayita kaafamu, yeroo qabduu hantuuttee gadhiiftu wantichi amaloota mara waliin mul'ata.
Gurmuuwwan hundaa keessaa Bahi
Gurmuuwwan hundaa baasuun gara murannoo baratamaatti deebisa.
Gurmuuwwan mara keessaa bahi
Title is: Kabala Dirqalootaa